ओलीमाथि एक पछि अर्को विपत १४ सांसदलाई कोरोना लागेपछि... बैशाख २७ ? - OSNepal
ओलीमाथि एक पछि अर्को विपत १४ सांसदलाई कोरोना लागेपछि... बैशाख २७ ?
बैशाख २४, २०७८ शुक्रवार १९:०८ बजे
काठमाडौं २४ बैशाख । संघीय संसद सचिवालयमा ६ सय १३ जनाको स्वाब संकलन गरिएकोमा १४ सांसदसहित ६५ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । बैशाख २२ २३ र २४ गते गरिएको परिक्षणमा १४ सांसदसहित संसदका कर्मचारी, पत्रकार तथा सुरक्षाकर्मीसमेत गरी ६५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यस्तैगरी, बाहिरै स्वाब परीक्षण गराएका केही सांसदहरुमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख २७ मा संसद विश्वासको मत लिजने नियाणर्् गरेपछि संसदका सबै व्यक्तिहरुको गरिएको कोरोना परिक्षणमा १४ जना सांसदलाई कोरोना पोजेटि देखिएको हो ।
अब ,कोरोना पोजेटिभ देखिएका सांसदहरुलाई संसद भवनमा कसरी प्रवेश गराई विश्वासको मतको प्रक्रिष अगाडी बढाउने विषयमा संसद सचिवालय गम्भिर बनेको छ । विश्वासको मत माग्न विपक्षीदलसँगको भेटलाई तिव्रता दिएका ओलीलाई यो अर्को चुनौती बनेको छ ।